Nayakhabar.com: राजेश हमालको कपालमा कसले चलाउछ कैची ?
राजेश हमालको कपालमा कसले चलाउछ कैची ?
काठमाडौं । नायक राजेश हमाल र उनको लामो कपाल एकअर्काका पर्यायवाचीजस्तै हुन् । लामो जुल्फी हल्लाउँदै ‘हे’ भनेकै भरमा भिलेनहरू साइड लाग्थे । अनि दर्शकको ताली र सिठीले हल गुन्जिन्थ्यो । राजेशका धेरै फिल्ममा यस्तो सिलसिला चलिरह्यो ।
तर, राजेशको कपालको चर्चा जति चल्छ, त्यति यसलाई स्याहार गर्नेबारे धेरैलाई पत्तो छैन । आखिर कसले कैंची चलाउँछ उनको कपालमा ? यसको उत्तर हमाल स्वयंले दिएका छन्, आफ्नै फेसबुकमार्फत् ।
‘रामले मेरो कपाल पछिल्लो दस वर्षदेखि काट्दै आइरहेका छन्,’ राजेशले फेसबुकमा कपाल काट्दै गरेको फोटोसमेत पोस्ट गरेका छन्, जसमा कपाल काट्नेलाई आफ्नो मित्रसमेत बताउँदै थपेका छन्, ‘म उसको सर्लाही घर पनि गएको छु ।’
सर्लाही घर भएका राम ठाकुरले सहयोगीनगरमा आफ्नै सैलुनसमेत चलाउँदै आएका छन् । राजेशको कपाल काट्न भने उनी कपुरधारा नै पुग्ने गरेका रहेछन् । ‘राजेश दादाले घरमै बोलाउनुहुन्छ,’ रामले रजेशको कपालको विशेषताबारे भने, ‘उहाँको कपाल अझै पनि बाक्लो र सिल्की छ ।’
त्यसो त रामले धेरै फिल्ममा राजेशको हेयर स्टाइलिस्टको भूमिकासमेत निर्वाह गरेका छन् । ‘हँसिया’ मा छोटो कपालमा भिलेन गेटअपमा राजेशलाई उनैले प्रस्तुत गरेका थिए । राजेशको कपालमा कैंची चलाउँदै आएका रामले प्राय सबै नायकरसेलिब्रेटीको कपाल मिलाउँदै आएका छन् ।
राजेशले दस वर्षदेखि कपाल कटाउँदै आएका रामलाई अहिले आएर सार्वजनिक गर्नुको पनि कारण रहेछ । केही समयदेखि अन्य नाईले पनि उनको कपाल काट्ने गरेको दाबी गर्न थालेपछि आधिकारीक रूपमा आफ्नो हेयर स्टाइलिस्टको परिचय गराएका रहेछन् ।